Ny spiramycine ve dia macrolide? - BALLYA
Posted on Janoary 15, 2021, Nataon'i Jason, Sokajy antibiotika
Inona no atao hoe spiramycine?
Vokatry ny Spiramycine
Spiramycine dia vovoka fotsy na mavo somary misy fofona kely; kely hygroscopic. Ny spiramycine dia mety levona amin'ny methanol, étanol, acétone ary etera, saika tsy voavaky anaty rano ary tsy mety simba amin'ny ether solika. A macrolide antibiotika azo avy amin'ny sehatry ny kolontsaina Streptomyces ambofaciens. Spiramycin dia asidra acetylspiramycin. Aorian'ny fitantanana am-bava, esorina ny vondrona acetyl mba hampisehoana vokatra mahery vaika. Spiramycin dia mpiorina bakteria mahery, ary misy vokany bakteria raha tsy amin'ny fifantohana avo be.
Spiramycine dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria sy ny vokatry ny bakteria (PAE) ao amin'ny vatana, afaka manatsara ny phagocytosis an'ny phagosit, ary miparitaka be ao amin'ny vatana. Spiramycine dia manana fifantohana betsaka kokoa amin'ny sela sela noho ny erythromycine ary tsy dia misy vokany ratsy noho ny erythromycine. Spiramycine dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana ny aretin-tsofina, orona, tenda ary taovam-pisefoana ateraky ny bakteria miabo tsara sy bakteria miiba gram-ratsy sasany. Izy io dia mety amin'ny fitsaboana otitis media, periodontitis, sinusitis maranitra ary lava-bava sy tenda orona amin'ny sofina vokatry ny bakteria mora tohina. Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana toxoplasmosis.
Spiramycin (SPM) dia antibiotika macrolide miisa enina ambin'ny folo. Ny derivative acetylated, acetylspiramycin, dia manana ny toetran'ny fifangaroan'ny tavy ambony, ny poizina ambany ary ny fahombiazan'ny vivo lava. Izy io dia mahomby amin'ny mastitis maranitra, ny fivontosan'ny lymph node ary ny periodontitis. Omura dia nanandrana fanandramana isotop hanaporofoana fa ny peratra lactone an'ny SPM dia misy molekiola 5 an'ny asidra acetic, 1 molekiola asidra propionika, molekiola 1 an'ny asidra butyric ary molekiola 1 an'ny precursor tsy fantatra (singa karbonika roa).
Ny biosynthesis an'ny peratra lactone dia manomboka amin'ny molekiola propionyl-CoA, arahin'ny molekiola 2-methylmalonyl-CoA. Ny fitambaran'ny karbaona telo dia tsy vitan'ny mpialoha lalana ny biosynthesis an'ny SPM, fa ny fampidiran'ny propionyl-CoA carboxylase. Ny mycaminose telo ao amin'ny molekiola dia azo avy amin'ny molekiola glucose feno, ny vondrona N-methyl ary C-methyl amin'ny mycaminos dia nalaina avy amin'ny methionine, ary ny loharanon'ny atomoma azota amin'ny vondrona N-methyl dia mbola tsy nohazavaina tanteraka.
Rovamycine dia antibiotika macrolide azo avy amin'ny sehatry ny kolontsaina Streptomyces ambofaciens. Spiramycin dia asidra acetylspiramycin. Aorian'ny fitantanana am-bava, esorina ny vondrona acetyl mba hampisehoana vokatra mahery vaika. Rovamycine dia mpiasan'ny bakteria mahery, ary tsy misy vokany amin'ny bakteria raha tsy amin'ny fifantohana avo be ihany. Ny fomba fiasan'ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny singa 50S an'ny vatan'ny ribonucleoprotein bakteria, dia manakana ny fanitarana ny rojo peptide izy io ary misy fiantraikany amin'ny fampiroboroboana ny proteinina bakteria mba hahatratrarana ny vokatry ny bakteria.
Ny karazana bakteria spiramisin dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine, ary ny vokatr'io bakteria io dia tsy mafy noho ny erythromycine, ary ny biavailika am-bava azy koa ambany noho ny erythromycine. Na izany aza, Staphylococcus aureus mahazaka erythromycine maro no mora tohina amin'ny spiramycin. Ho fanampin'izany, ny spiramycin dia misy vokany tsara kokoa aorian'ny antibiotika noho ny erythromycine.
Ny bakteria dia naneho fanoherana amin'ny alalàn'ny spiramycin sy erythromycine. Spiramycine dia manana hetsika mahery vaika fanoherana Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, pneumococcus, diphtheria, Bacillus anthracis ary Clostridium; ho fanampin'izany, ny spiramycine dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra ny Listeria sy ny Catabranham Bakteria, ny Neisseria gonorrhoeae, ny Campuslobacter fetus, ny Bacillus influenzae, ny Bacillus pertussis, ny Bacteroides, ny Perfringens, ny Propionibacterium acnes, ny Peptococcus ary ny Peptostreptococcus, ary koa ny Myc Chlamydia, Treponema pallidum, Toxoplasma, Cryptosporidium Etc.
Ny spiramy acetylspirillum am-bava dia tsy dia voakasiky ny asidra gastric, manodidina ny 40% no entina. 100mg spiramycin am-bava, 200mg, nahatratra ny haavon'ny rà ambony indrindra tamin'ny 2 ora, 0.8mg / L, 1mg / L. Ny zava-mahadomelina dia zaraina be aorian'ny fisotroana. Ny fifantohana amin'ny mony, ny pus, ny tsiranoka amin'ny bronchial ary ny tavy havokavoka dia avo kokoa noho ny fatran'ny rà, ary rehefa latsaka farafahakeliny ny fatran'ny rà dia mbola misy fifantohana zava-mahadomelina avo ao amin'ny sela.
Ny fifantohan'ny zava-mahadomelina ao amin'ny vatana dia avo amin'ny havokavoka, aty ary ny bile (ny fihenan'ny bile dia mety hahatratra 7-10 heny noho ny fihenan'ny serum). Spiramycin dia afaka miditra ao amin'ny macrophages, ary koa amin'ny alàlan'ny sakana eo amin'ny placental sy ny sakana amin'ny tsiranoka-cerebrospinal. Ny fihenan'ny tsiranoka cerebrospinal amin'ny meningite dia 65% amin'ny fifangaroan'ny rà. Rehefa tapitra ny zava-mahadomelina dia alaina voalohany amin'ny atiny ho acetylspiramycin. Ny antsasaky ny ain'ny spiramycin dia lava kokoa noho ny erythromycin sy acetylspiramycin, ary miangona ao amin'ny vatana aorian'ny fitantanana miverimberina.
Mety amin'ny fitsaboana ny aretin'ny taovam-pisefoana sy ny hoditra ary ny aretin-koditra malemy ateraky ny bakteria mora tohina, anisan'izany ny: pharyngitis, tonsillitis, bronchitis, pnemonia, pyoderma, erysipelas ary tazo mena.
Izy io dia mety amin'ny fitsaboana ny areti-nify am-bava sy otolaryngolojia ateraky ny bakteria mora tohina, toy ny otitis media, periodontitis, ary sinusitis maranitra.
Izy io koa dia azo ampiasaina amin'ny fitsaboana toxoplasmosis.
Ny spectrum antibacterial an'ny spiramycine dia mitovy amin'ny hafa macrolide antibiotika. Noho ny fivoahana miadana sy ny fifamatoran'ny tavy mahery, ny fahombiazan'ny bakteria ao amin'ny vatana dia tsara kokoa noho ny antibiotika mitovy amin'izany, indrindra ho an'ny pneumococcus sy ny streptococcus.
Etsy ankilany, noho ny fivoahana miadana, ny biby fiompy sy ny akoho amam-borona hohanin'ny olombelona dia mitaky fotoana fisintomana lava kokoa alohan'ny hamonoana azy.
Spiramycine dia antibiotika macrolide. Ny fiparitahan'ny bakteria dia mitovy amin'ny erythromycine. Izy io dia misy fiatraikany amin'ny bakteria Gram-positive sy bakteria Gram-négatip, rickettsiae ary viriosy lehibe, toy ny streptococcus, meningococcus, Bacillus pertussis, Mycoplasma pneumoniae, Bacillus diphtheria, Chlamydia trachomatis, Leptospira ary Clostridium sns. Spiramycine dia misy vokany lehibe amin'ny bakteria mahatohitra penisilinina, streptomycin, tetracycline ary chloramphenicol. Amin'ny lafiny klinika no tena ampiasana azy amin'ny aretina vokatry ny bakteria marefo isan-karazany, toy ny aretin'ny taovam-pisefoana ambony, aretin-kibo, meningite, mastitis, osteomyelitis, tazo mena, otitis media, otrikaretina buccal sy vava ary sinusitis.
Spiramycine dia misy fiantraikany mahery vaika amin'ny bakteria sy ny vokatry ny bakteria (PAE) in vivo, izay afaka manatsara ny phagocytosis an'ny phagocytes. Acetylspiramycin dia antibiotika misy vokarin'ny bakteria misy peratra macrolide miisa 16, ary ny vokany dia tsara raha tsy misy fiatraikany ratsy, ary matetika no safidy voalohany ho an'ny aretina toy ny bakteria gram-positive gram aobobika ary cocci anaerobic, ary koa mpisolo toerana ny olona tsy mahazaka olona beta lactam antibiotika.
Olon-dehibe: 0.8 ~ 1.2g isan'andro, mizara ho 3 ~ in-4; ho an'ny tranga henjana dia azo alaina hatramin'ny 1.6 ~ 2g isan'andro.
Ankizy: ny fatra isan'andro dia 20-30 mg / kg, atolotra in-2 ka hatramin'ny in-4.
Ny acetylspiramycin dia ny acetate an'ny spiramycin. Aorian'ny fitantanana am-bava, esorina ny vondrona acetyl mba hampisehoana vokatra mahery vaika. Acetylspiramycin dia mpiorina bakteria mahery, ary misy vokany bakteria amin'ny fifantohana avo be ihany.
Ny fomba fiasan'ny bakteria dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine. Amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ny singa 50S an'ny vatan'ny ribonucleoprotein bakteria, dia manakana ny fanitarana ny rojo peptide izy io ary misy fiantraikany amin'ny fampiroboroboana ny proteinina bakteria mba hahatratrarana ny vokatry ny bakteria. Ny asan'ny bakteria ao amin'ny acetylspiramycin dia mitovy amin'ny spiramycin, fa ny fihetsiky ny bakteria kosa dia malemy kokoa noho ny an'ny spiramycine. Ny karazana bakteria acetylspiramycin dia mitovy amin'ny an'ny erythromycine, ary ny vokatr'io bakteria io dia tsy mafy noho ny erythromycine, ary ny biavailika am-bava azy dia ambany noho ny erythromycine ihany koa. Na izany aza, maro ny Staphylococcus aureus mahatohitra erythromycine no mora tohina amin'ny acetylspiramycin.
Ho fanampin'izany, ny acetylspiramycin dia misy effet post-antibiotika tsara kokoa noho ny erythromycin. Ny bakteria dia naneho fanoherana amin'ny alalàn'ny acetylspiramycin sy erythromycine. Acetylspiramycin dia manana hetsika mahery vaika fanoherana ny Staphylococcus aureus, Streptococcus hemolyticus, Pneumococcus, Diphtheria, Bacillus anthracis ary Clostridium; Ho fanampin'izany, ny Acetylspiramycin dia manana hetsika fanoherana mahery vaika manohitra an'i Listeria sy Catab, Lanhamella, Neisseria gonorrhoeae, foetus Campylobacter, Bacillus influenzae, Bacillus pertussis, Bacteroides, Perfringens, Propionibacterium acnes, Peptococcus and Peptostreptococopas, asma andma andmax bibikely.
Ny takelaka acetylspiramycin dia afaka manohitra tsara ny Streptococcus pneumoniae, Streptococcus pyogenes, Enterobacter faecalis, sns., Nefa koa misy fiatraikany sasany, toy ny tsy mahazo aina amin'ny kibo na fanaintainana, mandoa, maloiloy, sns, izay matetika mitranga rehefa fatra ambony no ampiasaina. Na izany aza, ireo soritr'aretina ireo dia tsy hisy fiatraikany lehibe, raha tsy mijanona mihinana zava-mahadomelina ianao, dia hanjavona ireo soritr'aretina ireo. Ho fanampin'izay, ampahatsiahiviko anao fa ny acetylspiramycin dia mivoaka amin'ny alàlan'ny rafitra hepatobiliary, noho izany dia tsy tokony hasaina ho an'ireo marary manana tsy fahampiana hepatita sy tsy fahampian'ny voa ny zava-mahadomelina.
Mety ho an'ny tonsillitis, bronchitis, pnemonia, pharyngitis, otitis media, aretina amin'ny hoditra sy ny tavy malemy nateraky ny bakteria mora tohina toa ny Staphylococcus, Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Meningococcus, Neisseria gonorrhoeae, Diphtheria, Mycoplasma, Treponemaastonia, cholystitis, etc. tazo mena, aretin-nify sy maso sns.
Amin'ny lafiny klinika, izy io dia ampiasaina indrindra amin'ny aretina vokatry ny Staphylococcus aureus, Streptococcus, Pneumoniae Bacillus, Escherichia coli, Neisseria gonorrhoeae, toy ny pnemonia, bronchitis, abscess havokavoka, tazo mena, osteomyelitis, urethritis, mastitis, stye ary sac lacrimal Yan sns.
C. Fihetseham-po ratsy
Ny loza lehibe ateraky ny takelaka acetylspiramycin dia ny soritr'aretin'ny gastrointestinal toy ny fanaintainan'ny kibo, maloiloy, mandoa, tsy fahazotoan-komana ary ny fipoahan'ny zava-mahadomelina toy ny fatiantoka eo an-toerana na amin'ny rafitra sy ny mangidihidy, fa amin'ny ankapobeny dia tsy mila fitsaboana manokana izany ary afaka sitrana irery aorian'ny a vanim-potoana.
Na izany aza, raha misy ny mahazaka fanehoan-kevitra mahery vaika, toy ny tsy fahitana fisefoana, ny fihenan'ny tosidra sns, maika dia maika ny manatona dokotera eo noho eo. Ankoatr'izay, ny marary manana tsy fetean'ny aty sy ny voa mafy dia tsy tokony hampiasa ilay fanafody, satria mety hampitombo ny fahasimban'ny aty sy ny voa izany.
Vokatry ny Spiramycin-effets
Ny fanehoan-kevitry ny gastrointestinal dia malefaka kokoa noho ny erythromycine, indrindra ao anatin'izany ny maloiloy, mandoa, vava maina ary tsy fahazotoan-komana. Matetika izy io dia mitranga rehefa ampiasaina ny fanafody fatra avo lenta, ary manjavona ireo soritr'aretina aorian'ny fampiatoana ny fanafody.
Indraindray dia mahazaka fanehoan-kevitra mahazaka toy ny aretin-koditra sy ny aretin'ny zava-mahadomelina.
Indraindray dia miseho ny soritr'aretin'ny fanina, aretin'andoha, torimaso ary havizanana.
Fady ny marary tsy mahazaka spiramycine, erythromycine sy ny hafa macrolides. Ny Spiramycine dia afaka miditra ao amin'ny placenta, noho izany ilaina ny mandanja tanteraka ny lafy tsara sy ny lafy ratsy hanapahana hevitra raha hampiasa izany ho an'ny vehivavy bevohoka.
Tsy misy angona hanehoana raha spiramycin esorina amin'ny rononon-dreny, fa ny fanafody macrolide maro kosa dia azo esorina amin'ny rononon-dreny. Ka ny vehivavy mampinono dia tokony hitandrina an'ity vokatra ity ary hampiato ny fampinonoana raha ilaina izany. Ary ny fahombiazany sy ny fiarovana ireo marary zaza mandritra ny 6 volana dia mbola tsy voafaritra.
3. Fiaraha-miasa amin'ny zava-mahadomelina
Raha ampiasaina miaraka amin'ny metronidazole, dia misy vokarin'ny bakteria synergistic amin'ny Bacteroides fragilis amin'ny fitsapana in vitro.
Rehefa ampiasaina amin'ny trimethoprim, izy io dia misy fiantraikany amin'ny bakteria synergistic amin'ny haemophilus influenza bacilli.
Ny fampiasana miaraka amin'ny metabolite cytochrome P450 dia afaka mampitombo ny fifantohan'ny karbamazepine, terfenadine, cyclohexylbarbital ary phenytoin ao anaty serum.
Rehefa ampifandraisina amin'ny levodopa / carbidopa / carbidopa dia azo ahena ny faritra ambanin'ny fihodinan'ny fotoana (AUC) amin'ny levodopa.
Indraindray dia hita ny tsy fahazoana aina kely amin'ny gastrointestinal, toy ny maloiloy, mandoa, tsy fahazotoan-komana, fivalanana ary fivalanana.
Tsy fahita firy ny mahazaka zava-mahadomelina.
Contraindicated ho an'ny vehivavy bevohoka na vehivavy mandritra ny fampinonoana.
Spiramycine an'ny antibiotika macrolide. Spiramycine sy erythromycin dia manana mekanisma bakteria mitovy sy spectrum antibaktera mitovy. Ary ny spiramycin dia manana hery bakteria ambany kokoa noho ny erythromycine. Na izany aza, bakteria maro no mahatohitra erythromycine dia mora tohina amin'ny spiramycine, noho izany ny spiramycine sy ny erythromycine dia afaka mifameno.
BALLYA manome a fitsapana-ballya-spiramycin hilaza aminao raha misy spiramycin residues amin'ny sakafo sy sakafo.
MAYOCLINIC: Spiramycin (Làlana am-bava, làlan'ny tsindrona, zotram-pifandraisana)